Cunda တံတားကြည့်ရန်ယခုလှပ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး10 BalikesirCunda တံတားကြည့်ရန်ယခုလှပသည်
31 / 01 / 2020 10 Balikesir, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
Balıkesir Metropolitan Municipality သည်ပြည်သူလူထု၏တောင်းဆိုချက်အရ Cunda တံတားပေါ်မှမြင်ကွင်းကိုတားဆီးသောသံရထားလမ်းဖြင့်ဘေးဘက်ကွန်ကရစ်နံရံများကိုအစားထိုးသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Cunda တံတားကိုဖြတ်သန်းသွားသောနိုင်ငံသားများ၏တောင်းဆိုချက်ကBalıkesirမြို့တော်ဝန်YücelYılmazကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများ၏တောင်းဆိုချက်အရမြှို့နယ်ကမြင်ကွင်းကိုပိတ်ထားသောသံနံရံဖြင့်အစားထိုးသည်။ Cunda တံတား၏ဘေးနှစ်ဖက်ရှိခိုင်ခံ့သောကွန်ကရစ် parapet အပေါ်ကျောက်ဖုံးများကိုဂရုတစိုက်ဖယ်ရှားပြီးကွန်ကရစ် parapets ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သည်။
ဒါဟာ AYVALIK နှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်
ထို့အပြင်ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြည့်ရန်အသုံးပြုသောကားများသည်Ayvalıkစင်တာနှင့် Lale Island pass တွင်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ သို့သော်ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် Edremit ပင်လယ်အော်နှင့်Ayvalıkပင်လယ်အတွင်းရှိစီးဆင်းမှုကိုပြတ်တောက်စေပြီးပင်လယ်ရေသည်စီးဆင်းမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းခဲ့သည်။ Yıldızနည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့်အတူစီမံကိန်း၏အတိုင်းအတာအတွင်းကုန်းတွင်းပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ကွေ့အကြားစီးဆင်းမှုကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်Ayvalıkအားသဘာ ၀ သဘာ ၀ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ခရိုင်နှင့်ပင်လယ်ခံထိုက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့သည်။
Denizli Ropeway နှင်းနှင့်အတူနောက်ထပ်တင့်တယ်အခင်းအကျင်း
တူရကီ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား Now ကိုပါစိတ်ချရသော
Junk Wagon Caféစုန္ဒကျွန်းဓါတ်ရထား (ဗီဒီယို) ရှိခဲ့
တံတားများကျွန်းများကို C ထဲမှာလုပ်ဖို့
Kayseri အမြင့်မြန်နှုန်းရထားနှင့်အတူ သာ. ကောင်း၏သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
Undersecretary Aka: "TÜDEMSAŞသစ်အုပ်ချုပ်ရေးဒါဟာ သာ. ကောင်း၏ဂျော့ Make ပါလိမ့်မယ်"
မေလတွင် Renault ၌ယခု ၀ ယ်ပါ၊
အခုတော့ Kartepe နှင်းလျှောစီးနှင့်ဖက်ရှင်
Eurail Pass ကိုယခုတူရကီတို့ပါဝင်သည်ပါရှိသည်
အခုတော့ Metro Trabzon တောင်းဆို
ယခုလေယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းပြင်ဆင်နေဓါတ်ရထား Bursa, ထုတ်လုပ်
ပင်လယ်ကွေ့ Ido တွင်ကွာခြားချက်များ Now ကိုစတင်
အခုဆိုရင်လာသောအခါ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်